PostPost ngwa mgbakwunye maka WordPress kwalite | Martech Zone
Akwụsịrị post a. Enwere ọtụtụ na ntinye - nke m chọpụtara na ọ mara mma Mgbe Afọ gachara.
Otu n'ime plugins ndị na-ewu ewu m mepụtara maka WordPress bụ PostPost. Ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ịhazi ibe ha, post na ndepụta ha mana ime ya site na nchịkọta akụkọ nwere ike ịdị mgbagwoju anya. Ihe mgbakwunye a na-enye gị ohere ide ọdịnaya tupu ma ọ bụ mgbe ọ gachara na ibe, ibe niile, ma ọ bụ naanị na ndepụta gị.
Na nso nso a, ana m eme mgbapụ asọmpi site na ndepụta m na ngwa mgbakwunye abịarutela! M na-etinye a ozi n'ihu m ndepụta post n'ihi na folks kpaliri m na a kpọmkwem isiokwu. Email mbụ m nwetara na-enweta mmeri nke $ 125 na magazin .net, magazin mara mma nke na-ekpuchi ọtụtụ isiokwu na teknụzụ n'ịntanetị (na ụfọdụ ahịa). Fewbọchị ole na ole ka e mesịrị, ekwuputakwara m onye mmeri site na ngwa mgbakwunye!
PostPost na - enye gị ohere imekwu ihe na is_feed, is_ji na Uchechukwu ọrụ nke WordPress n’aghọtaghị otu esi edezi isiokwu gị ma ọ bụ dee koodu. Budata PostPost site na Pinye Ngwa.
Anaghị m emelite ngwa mgbakwunye ọ gwụla ma enwetara m ọtụtụ nzaghachi maka atụmatụ ma ọ bụ na m na-achọ ịmụ ihe ọhụrụ. N'okwu a, Achọrọ m itinye jQuery nke gụnyere WordPress. Ọ dịrịghị m mfe dịka m chere. Nke mbu, aghaghi m itinye ihe omuma na ngwa mgbakwunye ya na oru WordPress PHP.
N'ime koodu jQuery, enwerekwa obere mgbanwe di na nwunye. A, oku na-aga ịmalite jquery na-edekarị dị ka nke a:
$ (akwụkwọ) .worị (ọrụ ()
N'ime WordPress, ọ dị ka nke a:
jQuery (akwụkwọ) .worị (ọrụ ($)
Nke a bụ ọrụ na-atọ ụtọ ma ọ dị ezigbo mfe! N'ezie, agbakwunyere m ụfọdụ koodu iji bipụta ndepụta nke blọọgụ m na peeji nke nchịkwa - ọ bụ ngwa mgbakwunye na - akwụghị ụgwọ, yabụ kedu ịkwalite blọgụ m n'ọnọdụ mgbanwe.
Tags: mgbe ọdịnayamgbe ọdịnaya pluginmgbe postpost postpostpostpostpost ngwa mgbakwunyewordpress plugin
Ihe ọzọ mere ị ga-eji hụ WordPress n'anya. Daalụ!
Amit Roy kwuru
Nov 16, 2014 na 8:56 AM
kedu ka m ga - esi budata ngwa mgbakwunye a? “Https://martech.zone/projects/postpost/” peeji a anaghị arụ ọrụ
Nov 16, 2014 na 12:41 PM
Anyị kwụsịrị ngwa mgbakwunye a. Enwere ọtụtụ ndị ukwu akwadoro na nchekwa - lelee Mgbe Afọ gachara.